Minisitry ny Angovo sy ny Solitany : nindaosin’ny fahafatesana tampoka Ramanantsoa Rodolphe (NewsMada) | AEMW
Minisitry ny Angovo sy ny Solitany : nindaosin’ny fahafatesana tampoka Ramanantsoa Rodolphe (NewsMada)
Nindaosin’ny fahafatesana tampoka teo amin’ny faha-65 taona ny minisitry ny Angovo sy ny solitany, Ramanantsoa Rodolphe, tany Mahajanga ny asabotsy 20 aogositra teo. Araka ny fanambarana avy amin’ny Primatiora, « tampoka ny fahafatesany noho ny fahatapan’ny lalandràny ». Na teo am-panaovana fialan-tsasatra tany an-toerana aza ny tenany, azo antoka ihany ny fitohizan’ireo asa maro miandry azy noho ny krizy lava mahakasika ny famatsiana herinaratra eto amin’ny firenena.
Betsaka ireo tompon’andraikitra samihafa avy ao amin’ny faritra Boeny nandray ny adidiny tandrify azy, mbola nitondra azy teny amin’ny hopitaly, saingy tsy nahatana ny ainy intsony. Nitondra ny anjara birikiny koa ireo mpitantana any Boeny ireo teo amin’ny fikarakarana ny razana tany an-toerana. Ny asabotsy alina, nandrasana tao Mahajanga ny razana, nisy koa ny avy ao amin’ny governemanta tonga tany an-toerana, iraka nalefan’ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery.
Tsy niamboho adidy ny tenany raha voatendry nandray andraikitra ao amin’io “minisitera sarotra” io, ny 10 avrily 2016, niaraka tamin’ireo mpikambana hafa ao anatin’ny governemantan’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Efa nisahana ny andraikitra tale jeneralin’ny angovo tao amin’io minisitera io ihany ny tenany, nandritra ny fitondran’ny filoha Ravalomanana Marc ; mpikambana tao anatin’ny fitondrana Tetezamita izy, ny volana mey 2010, niara-niasa tamin’ny Praiminisitra Camille Vital.
Omaly ny nofony nandrasana tao amin’ny Tranompokonolona Tsianolondroa, Fianarantsoa ; anio, any amin’ny kaominina Ambalavao ; rahampitso, ho tonga any an-tanindrazany Ambinanindovoka ary ny fanitrihana ny nofony ny 24 aogositra. Izahay ato amin’ny gazety Taratra dia mirary fiononana feno sy fitahian’Andriamanitra ho an’ny vady amam-janany sy ny fianakaviany manontolo.
← Nieren-doza ireo mpandeha 7 : fiaramanidina nitrosona tetsy Ivato (NewsMada)
Tsy mandeha amin’ny laoniny… (NewsMada) →